Miyaad taqaanaa caloosha si aad u ogaato haddii ukun run ahaantii soo baxay? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO »Miyaad taqaanaa caloosha si aad u ogaatid haddii ukumani run ahaantii maqan yahay?
Miyaad taqaanaa caloosha si aad u ogaato haddii ukun run ahaantii soo baxay?
ANTI-GASPI - Sannad kasta malaayiin qumman ayaa ku soo dhacaya qashinka sababtoo ah taariikhda qolofka waa la soo dhaafay. Qoraal daabacay by The Guardian ayaa tilmaamaya in 720 malaayiin ukun ah lagu tuuro sanad walba kanaalka, saddex jeer ka badan toban sano ka hor. Maalin kasta waxay sababtaa sabab la taaban karo oo loogu talagalay khalkhalkan: Aqlabiyad aad u ballaaran oo Ingiriis ahi ma yaqaanaan farsamada si ay u ogaadaan haddii ukun weli la isticmaalo.
2019-04-09T10:52:40.176Z - Qorsheynta LCI
Faransiiska, 10 million ton oo cunto ah ayaa la soo tuurayaa sanad walba. Taariikhda dhicitaanku waxay masuul ka yihiin 20% qashinka guryaha. Immisa ka mid ah waxyaabahan qashin-qaadka ah ayaa loo bixiyay dutifully by digaagga in badanaa lagu xannibay xaaladaha la wareersan yahay? Haddii tiradaasi for geesle ah lama yaqaan, waxaa suurtagal ah si aad u hesho fikrad ah adigoo soo baxay dhinaca UK. Waxaa, sida ay article Guardian in culayskan shaqada bulshada anti-gaspi ah oo aad u wanaagsan si ay u tagaan, 720 million ukunta aakhirka qashinka sanad kasta, tiradaasi oo ah in uu ahaa saddex jeer hoose ee 2018.
Sababta horumartayarticle si aad u sharaxdo isku-darka 77% ee Britishka ma ogaan karaan sida loo ogaado haddii ukunku wali yahay mid wali ah inkastoo taariikhda dhicitaanku dhacay. Ma garanaysid farsamada midkood? Waan halkaan ku bixin doonaa.
Xiddig, seddex sawir
Si aad u ogaato haddii ukumaha gacantaada ku jira weli waa la cuni karaa, kaliya dhowr ilbiriqsi ayaa loo baahan yahay. Kaliya gawaarida ama digir salad ka buuxi biyo. Haddii ukumaha la galo, wali way fiicantahay. Haddii ay weli kacsan tahay, waa lagama maarmaan in si degdeg ah wax loo cuno. Haddii ay dib ugu noqoto dusha sare, waa mid aan taariikh ahayn.
Xaaladda ayaa sharraxaysa joogitaanka, dhamaadka wareegga ukunta, ee xumbada hawada. Digaaggu waa weyn yahay, qoyaanku wuu ka sii baxayaa, waxaana ka sii deynaya marinka hawada ee hawada. Taasina waa sababta ay u weynaatay ukunta, inta badan way ku foorarsadaan.
Si kastaba ha noqotee, taxadar inaadan isku dayin tijaabinta ukumaha ee aadan rabin in aad cuntaada u cuntid mustaqbalka dhow. Sababtoo ah quusto ayaa ka dhigi karta inay lumiso qaybta xayawaanka ah waxayna ka ilaalisaa bakteeriyada, oo ay ku jirto salmonella.
Kaadi ukumahaaga, waa suurtogal
Haddii aadan la qorsheeyey in la sameeyo waqti kasta omelet ah ugu dhakhsaha badan oo arag taariikhda uu dhacayo ee pack of ukunta soo socda khatar ah, og in ay tahay in la qaboobeen. Waxay ku filan tahay in ay kudhaqaaqaan, qoyan, iyaga oo yar yar oo ku rid weel hawo qaad leh. Waxay ku hadli karaan barafeeyaha muddo afar bilood ah. Haddii aad rabto oo kaliya in ay sii huruud ah, waxaa lagu talinayaa in ay ka fogaadaan buurbuur la xirrira, oggayn oo cusbo ama sonkor.
Suugada ukunta (omelettes, frittatas) sidoo kale waa la qaboojin karaa iyada oo aan wax dhibaato ah. Ukumaha adag ee la kariyey, dhinaca kale, waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo xoqan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lci.fr/nutrition/connaissez-vous-l-astuce-qui-permet-de-savoir-si-un-oeuf-est-reellement-perime-2117879.html
Waa in xal loo helaa xogtaada daruuriga ah - Talooyin